Akụkọ - 130th Canton ngosi
Ihe ngosi Canton maka oge mbụ n'igwe ojii atọ na-esochi n'usoro emere ka ịmaliteghachi nke na-anọghị n'ịntanetị, nke mbụ iji kwalite okirikiri ụlọ na nke mba ụwa dị ka isiokwu, ntinye mbụ n'ịntanetị na nke na-anọghị n'ịntanetị nke emere na nke mbụ, oge mbụ ijide. National Pearl River International Trade Forum.
A ga-enwe 130th Canton Fair online na offline n'otu oge maka ụbọchị ise, na ebe ngosi 51 maka ụdị ngwaahịa 16. N'ime ha, ebe ngosi ihe ngosi offline bụ ihe dịka 400,000 square mita, na ụlọ ọrụ ika dị ka ndị isi ngosi, na-elekwasị anya n'ịmepụta ika. àgwà ngosi, na-akwalite anụ ụlọ na mba abụọ okirikiri; The online ngosi ga-anọgide na-na mbụ 60,000 ụlọ ndò na-anọgide na-enye ihe online ahia imekọ ihe ọnụ na mgbanwe ikpo okwu maka 26,000 ụlọ ọrụ na zuru ụwa ọnụ buyers. The Canton Fair, nke bụ na ya 130th afọ, ga- webata mmemme mmeghe na nke mbụ Pearl River International Trade Forum. Ugbu a, n'okpuru otu onye ndu nke Canton Fair Organizing Committee, nzukọ ngosi ngosi ngosi, ogbako na nnọkọ, mgbochi ọrịa na njikwa ọrịa, nkwa ọrụ, ozi na mgbasa ozi na-aga n'ihu. were were.
Anyị ga-aga ngosi Canton a, anyị ga-enwekwa ụlọ ntu abụọ dị iche iche maka ute ụgbọ ala na akwa ọnụ ụzọ dị ka ọ na-adị. Ute ụgbọ ala anyị ka nwere ụlọ ntu 4 na nọmba ụlọ ntu bụ 8.2U17-18,V01-02, akwa ọnụ ụzọ anyị nwekwara ụlọ ndò 2 yana nọmba ụlọ ntu bụ 16.4B28-29. Anyị ga-anọ ebe a na-eche ọbịbịa gị mgbe niile.
Ka ọ dị ugbu a, iwu niile na-abịa na mmepụta China, anyị ga-agbalịsi ike nweta ohere ma mee ka àgwà anyị pụta ìhè. Ma n'ihi na ugbu a, ọnụ ahịa akụrụngwa niile na-abawanye, anyị ga-etolite ma gosipụta ụfọdụ ihe akụ na ụba iji nọgide na-azụ ahịa. N'ezie oge a anyị ga-egosi ụfọdụ ihe ọhụrụ na aghụghọ nke nwere ike soro gị. Bia n'uju, were olile-anya laghachi.
Oge nzipu: 28-09-21